Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo markale weerar ku qaaday madaxweyne Farmaajo – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo markale weerar ku qaaday madaxweyne Farmaajo
Wasiiru dowlihii madaxtooyada Soomaaliya ee xukuumadii hore islamarkaana ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad ayaa maqaal uu qoray ku iftiimiyay qaladaadka joogtada ah ay ku kacaan qaar ka mid ah madaxda Qaranka.
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo sidoo kale hore uga mid ahaa gacan-yareyaasha madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maqaalkiisa uga hadlay isbedelka ku dhacay madaxweyne Farmaajo iyo balan-qaadyadii uu hore u sameeyay intii uu ku jiray ololahiisa doorasho.
Hadaba nuqul ka mid ah qoraalka xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo soo gaaray warbaahinta Bulshoweyn ayaa u qornaa sida hoos ku xusan:-
Waxaan halkaan idinkugu soo gudbinayaa maqaal aan ugu talo galay inaan ku iftiimiyo qayb kamid ah qaladaadka joogtada ah ee qaar kamid ah madaxda Qaranku ka galayaan dalkii iyo dadkii ay mas’uuliyadda u haayeen.
Si loo saxo, dowladuna aysan dhumin kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed u muujiyeen doorashadii madaxweynaha, magacaabistii ra’iisul wasaaraha iyo dhismihii xukuumada.
Kalsoonidaas oo hadii aan la dabo qaban ay suurtogal tahay in ay noqoto LA MOOD NOQONSE WEYDAY..!
Waxa igu abuuray inaan maqaalkaan soo qoro, kadib markii aan arkay guuxa baaxadda leh ee ay qabaan dadka Soomaaliyeed ee ku aadan sidii ay filayeen iyo si-u-dhow midna inaysan wax u soconin. Kadib markii aan yaqiinsaday in madaxweynaha iyo qoloda ku xeeran aysan dareensaneyn inay jiraanba wax qaldan.
Anigoo ka duulaya qaladaad dhowr ah oo horay usoo dhacay ayna suuragal tahay hadii laga aamuso in ay Soomaaliya ku dhacdo mar labaad godkii mugdiga ahaa ee ay ku dhacday 27 sano kahor.
Sidaas daraadeed, aniga oo ka duulaya arrimaha aan soo sheegay ayaa waxaan go’aansaday inaan idinla wadaago qoraalkaan aan ku cabirayo dareenkeyga iyo midka malaayiin Soomaali ah ee aaminsan in madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo uusan ka dhabeeynin balanqaadyadii uu kahor jeediyay shacabka Soomaaliyeed, anigoo aaminsan inaysan jirin niyad xumi madaxweynaha dhankiisa ah ayaa hadana waxaan aaminsanahay qaladaadka jira inay sabab u yihiin dhowr arimood oo isbiirsaday, sida:-
1. Madaxweynaha oo shaqadu ku culus tahay, walina aad moodo inuu ku guddo jiro ololihii doorashada ee soo dhamaaday 8 Febraayo 2017, walina uusan usoo jeesan meel marinta balan qaadyadii lagu doortay. Madaxweynaha oo aan wali helin dad ehel u ah oo warbixin ka siiya waxa dalka kajira, talooyin wax ku’ool ahna siiya, taas oo sida muuqata iskaba daay waxa dalka ka jiree xitaa ay kari waayeen saaxiibadiis inay warbixino waafi ah ka siiyaan waxa xaafiiskiisa ka dhex-jira. Tusaale hadaan usoo qaato:
Shirkaas oo Golaha Shacabka dhaliil aad u xoogan ugu soo jeediyeen Madaxdii go’aankaas gaartay. Kuna sheegeen go’aamadaas kuwa ay soo gaareen Dowlado Shisheeye laguna xalaaleysanayo gacmo Soomaaliyeed. Kadibna Madaxweynuhu waxa uu geeyay go’aamadaas Shirkii London si Beesha Caalamka oo markii hore lahayd soo jeedinta go’aamadaas markale looga meelmariyo. Bilaabayna dhaqan gelinta go’aamadaas isagoo og in uu jiro Qaraar Baarlamaani ah oo arintaas kahor imaanaya.
Taasoo meesha ka saareysa doorkii Barlamaanka ee kor-joogtaynta iyo la xisaabtanka Hay’adaha Dowlada. Si cadna waxa uu ugu tumanayaa Madaxweynuhu Qaraar Dastuuri ah oo kasoo baxay Hay’adii Dalka ugu sareysay ee kalsoonideeda uu kursiga Madaxweyne nimo kula fadhiyo.
– Maalin dhaweyd waxaa magaalada Muqdisho yimid La’taliyaha Boqorka Sacuudiga si Soomaaliya ay u taageerto mowqifka Sacuudigu ka qaadatey dalka Qadar. Kadibna Madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay inay Soomaali dhex-dhexaad ka noqonayso khilaafka Sacuudiga kala dhaxeeya Qadar. Mowqifkaas oo la mid ah midkii Iran ay ka qaadatay go’doominta dalka Qadar. Marka la fiiriyo go’aanka Dowlad Soomaaliya qaatay waxa ay martay dhanka xulafada Qadar.
Waxaase intaas ka daran wafdigii loo deyriyay ee Sacuudiga ka socday diyaaradii ay wateen inay horay usii raacaan 6 Wasiir oo Xukuumada Soomaaliya katirsan oo doonaya lacagtii la balan qaaday iyo mashaariic kale ee Sacuudigu balan qaaday inay Soomaaliya ka hirgelinayso. Markii wafdigii Soomaalida tageena waxaa loo soo diray agaasimeyaal. Waxaana lagu wargeliyay hadii ay lacag rabaan inay mowqifkooda badalaan, taageeraana xulafada Sacuudigu hugaaminayo!
Sacuudigu waa Dal dhaqaale ahaan ay Soomaaliya ku xirantahay, sanadkii 2015 waxaa Soomaaliya Dalka Sacuudiga u iib geysay 5million neef oo xoolo ah. Mana jiro Dal Carbeed oo xiriir ganacsi oo intaas la’eg Soomaaliga kala dhaxeeyo. Carqalad ku timaada xiriirka Soomaaliya iyo Sacuudigana waxay taabaneysaa nolosha muwaadinka Soomaaliga ah ee reer guuraaga ah.
– Waxaa xusid mudan afartii sano ee la soo dhaafay Dowlada Qadar Safiir uma soo magacaabin dalka Soomaliya ilaa hadana waxaa u jooga wakiil (Charge de affair). Dowladda Soomaaliya waxay siisay DHUL muhiim ah oo ku yaal Faras magaalaha Muqdisho si ay uga dhisato Safaarad ilaa hadana dhagax lama dhigin! Inkasta oo Dowladihii isxigxigay ee Soomaaliya ay Qadar weydiisteen kaalmo dib u dhis, madax badanina ay booqdeen, haddane mashruuc lataaban karo oo ay Qadar ka fulisay Dalka ma jiro.
Halka Dowlada Imaaraadka oo dal ahaan ay isku dhigmaan Qadar, Safaarad ku leedahay Soomaaliya, Safiir rasmi ahna u joogo, Dalkana ay ka fulisay mashaariic waaweyn oo la taaban karo sida Isbitaalka Shiikh Zaayid, Xarunta Tababarka Ciidamada, Xarummo Waxbarasho iyo kuwa Maamul oo ay ka dhiseen Gobollo kala duwan ee Dalka.
W/Q:- Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad